Laanqayrta Cas oo dhaqaatir u dirtay Qaza | Saxil News Network
August 9, 2018 - Written by editor
Image captionDhaqaatiirta Laanqayrta Cas ayaa qaliin ku samaynaya dadkii ku dhaawacmay rabshadihii Qaza
Ha’yadda Laanqayrta Cas waxay sheegtay in labo kooxood oo dhaqaatiir ah ay u dirtay marinka Qaza si ay u caawiyaan dadkii dhawaan ku dhaawacmay qalalaasihii ka dhacay halkaasi.
In ka badan 13,000 oo Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay rabashadihii dhawaan ka dhacay xadka Falastiin iyo Israa’iil, sida ay sheegeen ha’ayadaha gargaarka.
Madaxa howlgalka ha’yadda ICRC ee bariga dhexe Robert Mardini wuxuu sheegay in dibadbaxyadii iyo rabshadihii Qaza ay gabaabsi dhanka adeegyada caafimaadka ay ku reebeen dadka deegaanka islamarkaasna xarumaha caafimaadka Qaza aysan qaabili karin dadka intaa la eg ee dhaawaca ah.
Wuxuu yiri ” Waxaan diiradda saaraynaa la tacaalidda xalaadda dadka qaba dhaawacyada xabadaha”
Hay’adda Laanqayrta Cas ayaa 50 sariirood oo qaliinka oo lagu fuliyo ka samaysay isbitaalka Al-Shifa ee ku yaalla marinka Qaza halkaaso horraan la geeyay dhaqaatiirta .
Falastiinayaddii askariga Israa’iil dhirbaaxday oo la xukumay
In ka badan boqolaal Falastiiniyiin ah ayay gantaallada Israa’iil dileen kaddib markii ay dibadbaxyo ka dhigeen xadka oo ay ku doonayaan qaxootiga reer Falastiin inay dib ugu laabtaan dhulka la haysto.
Israa’iil waxay sheegtay inay xabado ku fureen weeraryahano ama kuwa xadka si sharci darro ah uga soo tallaabaya balse Qaramada Midoobay iyo ha’yadaha xuquuqul insaanka waxay ku eedeeyeen Israa’iil inay adeegsanayso awood xad dhaaf ah